» अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस : सगरमाथाको चुचुरोमा गरिएको कल्पनाको सङ्कल्प…
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:४१ प्रकाशित
काठमाडौँ – विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु चानचनुे कुरा होइन । हिम्मत गरेर आठ हजार ८४८ मिटर अग्लो चुचुरो आँक्नेमध्ये थोरैले मात्र पाइला टेक्न सक्छन् ।
नेपाल मोहडाको अनुभवको अर्काे वर्ष तिब्बत मोहडाबाट विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहण उहाँका लागि अर्काे नौलो र आश्चर्य थियो । जब आठ हजार ३०० मिटरको उचाइँमा पुग्नुभयो । तब परिस्थितिले एक्कासी कोल्टे फे¥यो । अक्सिजन सकियो । न त तल ओर्लिनु न माथि उक्लनु । चिसो सिरेटोले ओठ सुक्छ थाले । तलतल हिउँको फाँट । सेता कुहिरामा कहिले घाम कहिले छायाँ पर्दै गरेको दृष्य पनि उहाँलाई धमिलो लाग्न थाल्यो । अक्सिजन भएको आफ्नो टेन्टमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । अक्सिजन लिन गएका सहयोगी फर्किएनन् ।
जीवनको त्यही अर्थपूर्ण घडीमा कल्पनाले आफूलाई बलियो बनाउनुभयो । आपूm मरेको प्रमाण के त ? मरेपछि मेरो शरीर फिर्ता गयो भने मान्छेले कल्पना यसरी मरेकी रहिछ भन्ने कुरा थाहा पाओस् भनेर सेल्फी भिडियो लिएको उहाँले आफ्नो अनुभूति सुनाउनुभयो । “म आठ हजार ३०० मा छु, अक्सिजन सकिएको छ, अहिले म अर्काको टेन्टमा छु, शेर्पालाई अक्सिजन खोज्न पठाएको छु, अक्सिजन पायो भने बाँच्छु नपाए मर्छु”, अभिलेख गरिएको भिडियोमा उल्लेख भएका शब्द सुनाउनुभयो ।
यसअघि पर्यटन विधामा पत्रकारिता गर्ने कल्पनाले ठुलो सङ्घर्षका साथ सन् २०१८ र २०१९ मा नेपाल र तिब्बतको दुबै मोहडाबाट सगरमाथा चढ्नुभयो । दुवै मोहडाबाट सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला पत्रकार दावी गर्ने उहाँले ‘गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्ड’मा नाम दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । संयोगले नेपाली र अङ्ग्रेजी एउटै मितिमा उहाँले सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो । दुवै वर्षको आरोहण अङ्ग्रेजी तारिख मे २३ थियो भने नेपाली मिति विसं २०७५/२०७६ को जेठ ९ नै परेको थियो ।
मानिस शिक्षित छ भने कसैको दवावमा पर्दैन । ऊ आफैँ निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उहाँहरुलाई छ । त्यसैले मुख्य प्राथमिकता शिक्षा हो । त्यसमा पनि शिक्षकबाटै अभियान चलाए सम्भव छ । बालबालिकाले असल शिक्षा पाउनका लागि पहिलो शिक्षकले सिक्नुपर्छ । सुधार शिक्षकबाट थाल्नुपर्छ अनि विद्यालय, त्यसपछि बल्ल बालबालिका हो । “लौरो, डस्टर र चक शिक्षकको हतियार होइन, हतियार भनेको खेल्दै सिक्ने शिक्षा प्रणाली हो, व्यवहारिक ज्ञान हो”, संस्थाका अध्यक्ष महर्जन भन्नुहुन्छ ।
हाल अभियान चलाएको विद्यालयमा शिक्षकलाई पनि आचारसंहितामा बाँधिएको छ । शिक्षकको हाजिरी, बालबालिकाको उपस्थिति, परीक्षा प्रणाली, बैठक सबै लिखितरुपमा अभिलेख राखिन्छ । कमि कमजोरी के भयो ? स्कुल मै छलफल गरी मुल्याङ्कन गरिन्छ । समग्र विद्यालय व्यवस्थापनको अबस्था के छ ? के सुधार गर्नुपर्छ ? र के राम्रो छ ? सबै मुल्यङ्कन गरेर कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्दा क्रमशः सुधारका सङ्केत देखिन थालेको महर्जनको अनुभव छ । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक बहादुर महर्जन दुवै संस्थाको सहकार्यमा स्कुलमा आमूल परिवर्तन भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । कुनै बेला बन्द हुन लागेको स्कुलमा अहिले नर्सरी कक्षादेखि ६ सम्म पढाइ हुन्छ ।